Ku-noqoshada Iskuulka: Amni-darro ku saabsan macaamilka, maamulayaasha 'boorka geeska' ayaa u soo baxaya '- TELES RELAY
ACCUEIL » kale Ku-noqoshada Iskuulka: Nabadgelyo-xumo, maamulayaasha waxay la kulmaan dibi geeska
Ku noqoshada Iskuulka: Amni-darrada ka jirta habdhaqanka, maamulayaasha 'face of the bull by gees ah'
Xarumaha dugsiga waxay ahaayeen xarumaha dhacdooyinka naxdinta leh ee ardayda ku lug leh.
Kaliya dhawaan Berliot Tsanou arday dhigta Dugsiga Sare ee Dugsiga Sare ee Deidi, Douala waxaa lagu xiray saaxiibkiisa tareenka. Kiisaska kale ee dugsiyadu waxay ku lug lahaayeen macalinka Dugsiga Sare ee Dugsiga Sare ee Laasqorayk ah kaas oo ay si xun ula dhaqmeen ardayda dugsiga. Badi dadka xadgudubka geystay ayaa la sheegay in ay ku hoos jiraan saameynta daroogada.
Waxaa la ogaaday in heerka isticmaalka mukhaadaraadka ee xerooyinka ay si joogto ah ugu socotay kor u kaca.
Kusoo dhaca arrimahan iyo hanjabaadaha kale ee amniga, Wasaaradaha oo dhererkoodu yahay waxbarasho.
Jawaabta, mas'uuliyiinta iskuulku waxay qaateen habab kala duwan oo wax looga qabto dhibaatada.
Dugsiga Sare ee Dugsiga Sare ee Mumboman, guddi ka hortagga daroogada, oo ka kooban saraakiisha ammaanka, macallimiinta iyo wakiillada ardayda.
Kooxdu waxay kormeertaa ardayda si ay u iibiyaan daroogada iyo isticmaalka dhismaha. Kooxdu waxay sidoo kale hubinaysaa tahriibinta waxyaabo waxyeello ka soo gaarta goobta dugsiga.
Machadka gaarka loo leeyahay ee Zang Mebenga, dhibaatooyinka khaldan ee khatar geliya amniga ardayda.
Iskuulkan, arday kasta waxaa lagu qabtaa daroogo ama walxo khatar ah.
Dhammaan 15 arday ayaa laga soo daayey hay'adda xilligan sannad dugsiyeedka kali ah ee isticmaalka daroogada joogtada ah.
Xarunta Waxbarashada Victory ah, macalimiinta joogto raadin bacaha ardayda walxaha waxyeello sida mindiyaha, garbaha, maqas, oo gogo 'oo dhalo, irbadaha iyo waxyaabaha kale ee la mamnuucay.
Waxay si dhakhso ah u qabsadeen, waalidiintooduna waxay maamulaan dugsiga.
Nabadgelyada Iskuulada: Khilaafaadka
Maaddaama ay jiraan xaalado amni darro oo ku lug leh ardayda dhigata dugsiyada, xukuumaddu waxay u dhawaaqeysaa gambaleelka digniinta.
Maamulayaasha dugsiyada ayaa qabta in aadaabtu ay ka bilowdo guriga.
Waxay ku doodaan in waalidku waajib ku tahay inay ku lug yeeshaan waxbarashada iyaga oo u qalma tusaalayaal si loo daboolo.
Sidaa darteed maamulayaasha ayaa ugu baaqaya waalidiinta in ay ka fogaadaan rabshadaha qoyska iyo dhaqamada kale ee xun.
Waalidiinta ay gacanta ku hayaan waxay ku eedeeyeen kororka rabshadaha dugsiga ee cadaadiska isku faca ah. Sida laga soo xigtay waalidiinta, ardaydu waxay nuqul ka sameeyaan waxqabadka dugsiyadooda iyagoo indhaha ku haya masuuliyiinta.
Ku socota dowladda, waa wicitaan si loola dagaallamo soo iibsashada daroogada.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://www.crtv.cm/2019/04/back-to-school-insecurity-on-compuses-administrators-face-the-bull-by-the-horn/
Waxa kaliya oo uu shaaca ka qaaday kansarkiisa midabtakoorka iyo horeyba "Jeopardy" ayaa ka hadlayey bedelida Alex Trebek
WAQTI-JOOJINTA Notre-Dame de Paris oo lagu burburiyay dab-bakhti (sawirro)